Blockchain समाचार 07.06.2018 - Blockchain समाचार
जुन 7, 2018 व्यवस्थापक
निष्ठा गुप्त विनिमय सुरु हुन सक्छ
निष्ठा निवेश, निरीक्षण एक दृढ $2.5 ट्रिलियन व्यवस्थित सम्पत्ति, अर्को स्तरमा Bitcoin लागि बजार धक्का भनेर उत्पादनहरु को buildout भर्नको छ.
यसबाहेक, निष्ठा एक डिजिटल सम्पत्ति विनिमय निर्माण गर्न राखने छ, एक आन्तरिक काम विज्ञापन अनुसार. फर्म एक DevOps सिस्टम ईन्जिनियर लागि देख छ “इन्जिनियर मद्दत गर्न, सिर्जना, र दुवै एक सार्वजनिक र निजी क्लाउड एउटा डिजिटल सम्पत्ति विनिमय फैलिनु।”
फर्म पनि गुप्त लागि जिम्मा समाधान मा काम गरिरहेको छ, अर्को काम विज्ञापन अनुसार.
फिडेलिटी सफलतापूर्वक यी उत्पादनहरु शुरूआत भने, यसलाई डिजिटल सम्पत्ति को लागि बजार मा एक वल स्ट्रीट दृढ गरेर ठूलो चाल को एक प्रतिनिधित्व हुनेछ.
यो टिप्पण लायक छ, निष्ठा गरेको सीईओ, अबीगेलले जनसन, Bitcoin एक proponent छ.
फिडेलिटी एक गुप्त विनिमय भेटी सुरु गर्छ भने, यो यकीनन नवजात गुप्त बजार मा एक ठूलो पर्खाल सडक दृढ गरेर ठूलो चाल बीच हुनेछ, जो बारे मा खडा $350 अरब.
थाईल्याण्ड परीक्षा केन्द्रिय बैंक cryptocurrency
बैंक थाईल्याण्ड गरेको राज्यपाल Veerathai Santiprabhob को हाल एक भाषण मा संकेत विभिन्न क्षेत्रहरु मा blockchain प्रविधि trialing मा एक थोक केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा विकास हाल देशको व्यापक प्रयासको भागको रूपमा पाइपलाइन छ भनेर.
परियोजना, नाम Inthanon, थाईल्याण्ड गरेको ऊंची पहाड को नाम साझेदारी, interbank लेनदेन दुवै छिटो र सस्ता बनाउन बैंक आफ्नै blockchain आधारित cryptocurrency सिर्जना गर्न खोज्ने.
उहाँले बोलीमा भने:
“कारण कम intermediation यी प्रयासहरु छिटो र सस्ता कारोबार र प्रमाणीकरणको लागि बाटो गर्नुपर्छ वर्तमान प्रणाली तुलना आवश्यक।”
उत्तरी ट्रस्ट blockchain मा बैठक मिनेट भण्डारण लागि प्याटेन्ट फाइलहरू
वित्तीय सेवाहरू दृढ उत्तरी ट्रस्ट blockchain प्रविधी प्रयोग गरेर सभा को रेकर्ड ब्याक अप लागि प्याटेन्ट जित्यो.
विधि बैठक गर्न सम्बन्धित डाटा कब्जा गर्न स्मार्ट अनुबंध को एक श्रृंखला utilizes, उपस्थित भएको छ को रेकर्ड सहित (तिनीहरूले बोक्न सक्छ उपकरणहरू स्रोत), बैठक भयो कहिले र कहाँ.
उत्तरी ट्रस्ट धेरै विशिष्ट प्रयोग मामला मा hones, घटना डाटा, र यो एक वितरण प्रणाली मार्फत परिचालन डाटा भेला को दृढ गरेको व्यापक प्रवृत्ति बोल्नुहुन्छ.
कोइनबेस नियमन जमानत दृढ बन्न प्रगति बनाउँछ
Cryptocurrency विनिमय कोइनबेस यो एक संघ नियमन दलाल-बिक्रेता परिचालन यसको लक्ष्य strides बनाउने थियो बुधवार घोषणा.
मुख्य परिचालन अधिकारी र अध्यक्ष Asiff Hirji फर्म एक दलाल-बिक्रेता इजाजतपत्र प्राप्त को प्रक्रिया मा छ कि एक कम्पनी ब्लग पोस्ट मा यस्तो लेखे. कम्पनी को एशिया | देखि अनुमोदन खोज्न चाहन्छ. जमानत र विनिमय आयोग (सेकेन्ड) र वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण (FINRA) blockchain आधारित जमानत प्रदान गर्न.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 06.06.2018
$118एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
गत वर्ष भन्दा बढी, an increas...
क्यानाडा पहिलो & only regu...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 06.06.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 08.06.2018
जुन 29, 2018 मा 10:23 AM